Waa maxay Kansarka? - iftineducation.com
iftineducation.com – Kansarku waa waa magac guud ee koox badan oo cuduro ah, waxaana lagu gartaa in unugyada jirka ka tirsan ay u shaqeeyaan si aan caadi ahayn ee hal ama ka badan xubnaha ama unugyada jidhka.
Kansarku waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee dhimashada adduunka. Noocyada kansarka dilaaga waxaa ka mid ah kansarka sambabada, kansarka mindhicirka, kansarka naasaha, kansarka qanjirka ‘prostate’, iyo kansarka ganaca.
Noocyada ugu badan ee kansarka waxaa ka mid ah kansarka qanjirka ‘prostate, kansarka naasaha, kansarka sanbabada, kansarka mindhicirka, iyo kansarka kaadiheysta.
Jirka dadku wuxuu ka kooban yahay bilyanno unugyo yaryar.
Unuga ayaa ayaa abuura qeyb kasta oo jirka ka tirsan, sida maqaarka, lafaha, wadnaha, sambabada, iyo xubno kale. Caadi ahaan unugada ayaa iskood u tarma si ay u kaalmeeyaan koriimada iyo qeybaha kale ee jirka.
Marka unugu bilaabo inuu u tarmo ama ukala qaybsamo si aan caadi ahayn, waxaa taa loo yaqaan buro (tumor). Burado waxay noqon kartaa buro aan kansareysanayn ama buro kaansareysan.
Burada aan kansareysanaynway kortaa laakiin kuma fido qaybaha kale ee jirka. Waxay keeni kartaa dhibaatooyin la taaban karo, sida is-hortaag ama waxay u ekaan kartaa wax aan caadi ahayn, laakiin badanaa waa la qalaa, dibna uma soo baxo. Burada kansareysan waa kansar.
Burada ayaa ku qaada weerar ama duulimaad qeybaha kale ee jirka. Waxay ku fidi kartaa qeybaha kale ee jirka, iyadoo abuuraysa burooyin cusub (midan ayaa la yiraahdaa metastasis).
Marka buradu kansareysan tahay, unugyada ayaa u koraya si aan la xadidi karin.
Mar marka qaarkood, hadii xataa buradii ugu horeysay qaliin lagu jaro, cudurka ayaa weli ku sii kori kara meeshii uu ka bilawday ama qaybo kale oo jirka ka tirsan hadii burooyin kansar ah ay horayba ugu faafeen.
Maxaa keena kansarka? la soco qeybta 2aad
Qaabka ugu fiican galmada Consult